Nhau - Kuchengetedza hunyanzvi hwegedhi remuti uye kutariswa mukushandiswa kwemazuva ese
Kuchengetedza hunyanzvi hwemusuwo wedanda uye kutariswa mukushandiswa kwemazuva ese
Mukushongedzwa kwazvino, nekuda kwemusuwo wehuni une hunhu hwekuvhara kune yakasikwa mameseji uye akasiyana ekushongedza mhedzisiro, zvave zvakawanda sarudzo dzevanhu kushongedza mukamuri. Saka mushure mekunge gonhi remuti raiswa, maitiro ekuona kuti hupenyu hwebasa remusuwo wematanda unoramba uchingoti rebei mukushandisa? Mune ino nyaya, Mujiang achazivisa hunyanzvi hwekuchengetedza uye yekushandisa zuva nezuva matanho ekudzivirira emikova yematanda. Ngatizvizivei.
Pamusoro kuchenesa. Mazuva ese kuchenesa guruva uye tsvina pamusoro pemusuwo wedanda ibasa rekugadzirisa basa, asi zvakare rinoda moyo murefu. Kana uchibvisa banga pamusoro pemusuwo wedanda, jira rakapfava redonje rinofanira kushandiswa kupukuta, nekuti zviri nyore kukwenya pamusoro nejira rakaomarara. Kana iyo banga ranyanya kuoneka, unogona kushandisa kwazvakarerekera yekuchenesa mumiriri, mushonga wemazino kana fenicha yakasarudzika yekuchenesa mumiriri. Mushure mokubvisa tsvina, pukuta iyo yakaoma. Usachigeza nemvura. Kunyanya kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kuchinhu chekuti jira rakanyoroveswa nerethal reagent kana mvura haifanire kuiswa pamusoro pemusuwo wehuni kwenguva yakareba, zvikasadaro inokuvadza pamusoro uye ichichinja ruvara kana kubvisa pasi pekupedzisa zvinhu. Mukuwedzera, teerera kumakona emusuwo wedanda, usazora zvakanyanya, zvikasadaro zvinokonzeresa pendi yekona kudonha. Guruva pamikova yematanda rinogona kucheneswa nechenesa.
2.Ukuwedzera kune yekuchenesa kwepasirese kuita zvakanaka, zvigadzirwa zvemusuwo zvehuni zvinodawo kunyatso chengetwa. Nekuda kwehunhu hwekuomesa shrinkage uye kuwedzera kwehunyoro, kutsemuka kudiki kana shrinkage kunogona kuitika kana tembiricha nehunyoro zvakatosiyana. Chatinofanira kuziva ndechekuti neshanduko yemamiriro ekunze, shrinkage yehuni uye zvimwe zviitiko zviitiko zvepanyama. Asi kana kunaka kwemusuwo wedanda kusiri kwakanaka, kana musuwo wematanda usiri zvigadzirwa zvinogoneswa, musuwo wematanda uri nyore kuumbika. Naizvozvo, sarudza mhando yemusuwo wepakutanga wedanda, sekureba sekusava nemaune kukuvara, hazvisi nyore kuti zvioneke kutsemuka.
3. Izvo zvinyorwa zvine hukama nehupenyu hwebasa remasuwo emapuranga. 1. Kufunga kurodha kwakawanda kwemusuwo, zvinodikanwa kudzikisira kurembera kwezvinhu zvinorema pamashizha emusuwo, kuitira kudzivirira kubonderana uye kukwenya kwezvinhu zvakapinza. Paunenge uchivhura kana kuvhara gonhi, usashandise simba rakawandisa uye usarove gonhi remuti. 2. Usavhure gonhi remusuwo nemaoko akanyorova, kana kumwaya zvinokanganisa zvinokanganisa pamadhoo emapuranga nekiyi. 3. Yezve hinji, yekuvhara gonhi uye nezvimwe zvakajairwa zviitwa zvehardware zvishongedzo, nekukasira uzvisunge kana zvasununguka. Kana loko kwemusuwo kusingashande, unogona kuwedzera huwandu hwakakodzera hwepenzura furo mugomba rakakosha, asi usapomhodza mafuta. 4. Kana iwe uchida kuchengetedza iyo yakajeka ruvara rweye gonhi remuti, iwe unogona kugara uchiisa wakisi kuchichengetedzwa kwayo. Kuti udzivise dambudziko mukuchengetedza kwemasuwo emapuranga mune ramangwana, zvinodikanwa kuti uwedzere kuita kana uchitenga. Kune iro remusuwo wepakutanga wedanda, chinhu chekutanga chekufunga kusarudza mhando yakanaka, kusiyanisa imwe ye "yekutanga yemusuwo wedanda" inoonekwa mumusika. Mazuva ano, musika wepakutanga wemusuwo wehuni unopisa. Izvo hazvigone kutarisirwa kunze kuti mimwe mikova yehuni yekunyepedzera inoshandiswa semasuo epakutanga ehuni. Uye kuitira kudzikisira mutengo, huni dzasara dzinoshandiswa kuveza, uye kunama kunamatira kunoshandiswa kunyepera huni hwese. Ava vatengi vanofanira kuteerera.
Pano, Mujiang anokuyeuchidza: vamwe vagadziri vadiki vanotenga zvigadzirwa kubva pamusika wematanda uye kugadzirisa zvigadzirwa zvakapedzwa zvakananga. Kuitira kurerutsa nzira yekugadzira, matanda asina kuchengetedzwa kwehutano, kudzikisira, kupfava faibha uye kuomesa zvinogadziriswa uye zvinotengeswa, zvichikonzera kuitika kwechiitiko chekupedzisira.